IHyatt inyusa iphothifoliyo yayo yolonwabo kunye nokufunyanwa kweQela lezoLonwabo leApple
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » IHyatt inyusa iphothifoliyo yayo yolonwabo kunye nokufunyanwa kweQela lezoLonwabo leApple
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuvuselelwa okunamandla kohambo lokunethezeka kunye nokwandiswa kweendawo zentengiso zeHyatt kwinzuzo yexesha elizayo yenkampani.
UHyatt uyayandisa eyokuzonwabisa.
UHyatt, ufumana iApple Leisure Group ye- $ 2.7 yezigidigidi.
I-Apple Leisure isebenza ngeendawo zokungcebeleka ezibandakanya zonke iihotele ezikwii-brand ezahlukeneyo.
Iqela lasehotele eliphambili lase-US, iHyatt, uthenga indawo yokuchithela iiholide, iApple Leisure Group, nge-US $ 2.7 yezigidigidi, isandisa iindawo zayo zokuzonwabisa. Ukuvuselelwa okunamandla kohambo lokunethezeka kunye nokwandiswa kweendawo zentengiso zeHyatt kwinzuzo yexesha elizayo yenkampani.
Iqela lokuzonwabisa leApple isebenza ngeendawo zokungcebeleka ezili-100 ezibandakanya zonke iiholide zokunethezeka kwiimpawu ezahlukeneyo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iiNdawo zokuHlala zeSunscape kunye neeSpas ecaleni kweeNdawo zokuLahlula iiMfihlo kunye neeSpas. Olu kongezelelo luza kuyonyusa kakhulu ipotifoliyo kaHyatt, esele ijolise ikakhulu kule marike.
Ukufunyanwa kwakhona kohambo lokunethezeka kujongeka kuthembisa. Uqikelelo lwabahlalutyi beshishini bacebisa ukuba ubusuku kwigumbi ekuhlalwa kulo kwiihotele zodidi oluphezulu (kwiimarike ezinkulu ezingama-60) ziya kudibana nonyaka omkhulu enyakeni (YoY) (69.7%) ngo-2021 kunohlahlo-lwabiwo mali (59%).
Ukubuyiswa okukhulu kwecandelo lokunethezeka kunokwenzeka ukuba kubonakalise ukwanda kwimfuno kunye nokubonelelwa kweminikelo yokunethezeka ngo-2021, kwaye luphawu oluthembisayo lokwandiswa Hyatt ipotifoliyo. Ukuphindwa kabini kokunikezelwa kweholide kaHyatt kuya kwenza kakuhle ukonyuka kwemfuno zokuhamba ngexesha lokuphola ngexesha le-COVID-19. Xa iimfuno zokuhamba zeshishini zibekelwe ukuhlala ziphantsi ukuze kubonakale, oku kufunyanwa kuya kuvumela uHyatt ukuba aqinise isikhundla sakhe kwintengiso ekulindeleke ukuba ibuye ngokukhawuleza.
Uvoto lwamva nje lweshishini lufumanise ukuba i-28% yabaphenduli behlabathi ngoku inebhajethi ephezulu kakhulu (16%) okanye ethe kratya (12%) yeeholide, ebonisa ukuba kukho ngokucacileyo iqela labathengi abafuna ukuchitha ngaphezulu kwikhefu labo elilandelayo.
Abanye abathengi, ukuvalwa kwelizwe kunye nezithintelo zokuhamba kumazwe aphesheya ziye zathetha ixesha elininzi ekhaya. Oku kuvumele ukuba kongezwe kwaye nohlahlo-lwabiwo mali lokunyuka lonyukile kwabanye. Ke ngoko, abanye abahambi bakulungele ukuhlawula ngaphezulu, befuna ikhefu lokunethezeka, kwaye bamakisha itheko elikhethekileyo kuhambo lwabo olulandelayo.
Iindlela zamva nje zokulala zibonisa abanye abanini beehotele esele besandisa iipotifoliyo zabo zodidi. Nge-Agasti ka-2021 wabona iQela leehotele i-InterContinental (IHG) libhengeza izicwangciso zokuphehlelela uphawu olutsha lweholide yokunyusa ukukhula. UMarriott ukwabhengeze ukuba unomdla wokunyusa indawo ebandakanya konke ukubonelela.
Iqela leLeisure leApple sele ingomnye wabasebenzisi abakhenkethi abakhulu kwiholide zephakeji eMelika, Mexico naseCaribbean. Esi sivumelwano siza kunyusa ipotifoliyo yaseHyatt nge-60%, iqinisa ukhuphiswano kunye nokuthandwa kukaMarriott, uHilton kunye ne-IHG.